भारतले समेत हस्ताक्षर गर्न नमानेको यस आयोजना के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ? – Etajakhabar
एकराज पाठक, काठमाडौँ – के नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ला ? यो प्रश्न यतिखेर नेपालमा पुनः एकपटक उठेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएपछि लामो समयदेखिको यो प्रश्न फेरि उठेको हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०९, २०७५ समय: १४:३२:३६